Umdlalo wasimahla woLoliwe oHlangeneyo | Gcina A Isitimela
Umdlalo wasimahla woLoliwe oHlangeneyo
ekhaya > Umdlalo wasimahla woLoliwe oHlangeneyo
Umdlalo woLoliwe – Qeqesha uMdlalo oDibeneyo – Umdlalo woololiwe wasimahla – Uloliwe Simulator – Oololiwe abasebenzisanayo
Umdlalo woLoliwe oDibeneyo
Ngena ngaphakathi kwilizwe elimangalisayo loololiwe kwaye wonwabele lo mdlalo woqeqesho loololiwe, yonke imizuzwana embalwa uloliwe omtsha ushiya isikhululo kwaye kufuneka ulungise umkhondo kuloliwe ohamba ngenani, ingafikelela ngokukhuselekileyo kwi indawo eyiyo.
Imigaqo yoMdlalo woLoliwe
Le yimigaqo ethile, izikhokelo, kunye neempawu simahla Umdlalo woololiwe:
Cofa Dlala phezulu ngasekhohlo komdlalo kaloliwe.
Emva koko skrolela kwaye ucofe Qalisa embindini wescreen somdlalo.
Ungabatshintsha oololiwe imephu.
Isitimela ngasinye sinenombolo kuso kwaye isikhululo sikaloliwe esikufutshane naso sinenombolo.
the imizila kaloliwe kulo mdlalo kufuneka ulungiswe ngendlela yokuvumela ukudlula koololiwe ukuya kwindawo ekuyiwa kuyo.
Ukuba ufikelela kwindawo eyiyo kulo mdlalo wololiwe osebenzayo, uya kufumana amanqaku amahle.
Ukuba uloliwe wakho ufika kwindawo engeyiyo kwindawo yokuhamba ngololiwe, uya kunikwa amanqaku amabi.
Ungayihoya imithi ekwiTreyini yokudlala umdlalo, zenzelwe nje ukuba umdlalo ujonge ngakumbi, avelisi nawaphi na amanqaku kuwe.
Umdlalo ulungele abantu abadala kunye nabantwana abonwabela uloliwe.
Umdlalo wethu wokulinganisa uloliwe asimahla, ungasixhasa ngokuthi:
Bhalisa kuluhlu lwethu lokuposa kwibhlog
Thenga amatikiti etreyini kwi-saveatrain.com
Iscreen sethu soololiwe Simulator
Nalu ugculelo lomdlalo wethu ophambili kuloliwe (owona mdlalo ungezantsi), qala namhlanje ukuba yintshatsheli kaloliwe.
Ukuze udlale umdlalo kaloliwe kufuneka ucofe DLALANI ngaphezulu ngasekhohlo, ke ngoku QALA embindini wekhusi
Okokugqibela Umdlalo wethu woololiwe abaSebenzisanayo
Akukho Mdlalo Iindlela zoLoliwe zoqobo
Ezi zezinye zeendlela eziphambili zikaloliwe onokuzifumana kwi saveatrain.com iwebhusayithi.
KUNYE OKUNINZI OKUNGAKUMBI
Gcina uloliwe uhlala ebeka abathengi bayo abahambi nabaqeqeshi abahamba phambi kwenkampani, sikholelwa ukuba oku kudala ubuhlobo obungcono phakathi kwethu kunye nenkxaso Gcina uloliwe kwixesha elide, Ke ngoko sihlala sizama ukukwenzela umxholo owonwabisayo noluncedo kuwe, ngeli xesha sikhethe ukwenza umdlalo wesitimela simahla, ke awuhlawuli omnye umdlalo okanye uqeqesho lokusebenza lomdlalo kwaye usikhumbule njengokunika ukonwabisa simahla ? ?.
Ngoku ukuba ufumanise malunga noMdlalo wethu woLoliwe oSimahla, siyakholwa ukuba uyazi ukuba ukuze ufumane Amaxabiso Best kwaye angamanani Amatikiti Ukuqeqesha – Kuya kufuneka uodole amatikiti etreyini yakho kwi Gcina A Isitimela.
Ingaba ufuna kuzakulungisa eli phepha kwi sayithi yakho, nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-game%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)